(Amazing Hotel ) မှ ငပလီကမ်းခြေရှိ အများပိုင်မြေ အား ကျုးကျော်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » (Amazing Hotel ) မှ ငပလီကမ်းခြေရှိ အများပိုင်မြေ အား ကျုးကျော်ခြင်း
(Amazing Hotel ) မှ ငပလီကမ်းခြေရှိ အများပိုင်မြေ အား ကျုးကျော်ခြင်း
Posted by Myochit on Aug 9, 2011 in Copy/Paste | 13 comments
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့ရှိ ငလပီကမ်းခြေ အပမ်းဖြေ နေရာ ကွင်းအမှတ် (၂၀၂) ငပလီမှ မဇင်လေဆိပ် နားအထိ ကမ်းခြေ မြေနေရာများအား တပ်မတော်
ဦးပိုင်မြေ အဖြစ် သိမ်းဆည်းပြီး ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ငှါးရမ်းပေးထားခဲ့ပါသည်၊ ၎င်း ငှါးရမ်း မြေ အပြင် ပြည်သူများ အသုံးပြုရန် မြေ (၀.၃၈) ဧက
ရှိရာ (Amazing Hotel) လုပ်ငန်းရှင်မှ အလျား (၁၀၉) ပေ မြေဧက (၀.၂၃) အားကျုးကျော် ခြံစည်းရိုးကာ ထားခြင်းကို အများပြည်သူများ၏တင်ပြချက်
(၁)- သံတွဲခရိုင် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ မှ (၁၇.၂.၂၀၁၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၁၀၁/၁-၁/ ခယက သံတွဲ (၂၁၀) တစ်ကြိမ်-
(၂)- သံတွဲမြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ (၁၈.၂.၂၀၁၀) ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၁၁၂/၁-၁ မယက သံတွဲ (၁၃၇) တစ်ကြိမ် –
(၃)- သံတွဲမြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ (၁.၄.၂၀၁၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၁၁၂/၁-၁/ မယက သံတွဲ(၂၅၅) တစ်ကြိမ်-
အထက်ရည်ညွှန်းချက် (၁) (၂) (၃) ပါစာအရ (၁၅.၄.၂၀၁၀) နေ့နောက်ဆုံးထား ဖယ်ရှားပေးရန် ပေးပို့ထားပီးဖြစ်ပါသည်၊
(၄)- (၃.၇.၂၀၁၀) ရက်နေ့တွင် မြို့မိမြို့ဖ အများပြည်သူများ၏ အကြိမ်ကြိမ် တင်ပြတောင်းဆိုချက်အရ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အပါဝင်
ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး၊ ခရိုင်ရဲမှုးကြီး နှင့် စည်ပင်ညွှန်ကြားရေးမှုးတို့ ပူးပေါင်း၍ ကျုးကျော်မြေအား ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းကို ကျေးရွာ
အုပ်ချုပ်ရေးမှုးသို့ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးမှ (၃၁.၇.၂၀၁၁) နေ့ နောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးရန် အကြောင်းကြားထားသော်လည်း
ယနေ့ (၈.၈.၂၀၁၁) အုပ်ချုပ်ရေးဋ္ဌာန အာဏာပိုင်များ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လုံးဝ လိုက်နာခြင်းမရှိပါကြောင်းနှင့် အရားဥပဒေ၏ အထက်တွင် စီးပွါးရေး
လုပ်ငန်းရှင်များ ရောက်ရှိနေခြင်း ကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်မှ အစိုးရအဖွဲ့များ သိရှိပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
(မြို့မိမြို့ဖ များနှင့်အများပြည်သူများ၏ လိုအင်ဆန္ဒအရ)
View all posts by Myochit →
ဘာကြီးလဲ..တစ်မျိုးကြီးပါလား..မင်းကလဲ တရားဥပဒေရဲ့အထက်မှာ လုပ်ငန်းရှင်ရှိသကွ.ဒါလေးများ..
လူကလေး ထွန်းဝေ နဲ့ လူကလေး မြတ်ကျော် တို့ရဲ့ နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုက် ဇတ်လမ်း တွေပါ…
ဘုရားမှန်မှန်ရှစ်ခိုး ကွာ..ပြီးတော့ဆုတောင်း..ဒီပို့စ် ကို မင်းတို့အားကိုးတဲ့ သူတွေ မြင်ပါစေလို့ ..မြင်ပြီးရင်လဲ ထိုင်ကြည့်မနေပါနဲ့
လို့..ဆုတောင်းပေးပေါ့… ဟုတ်ပီလား… ( နောက်တာနော် )..
အော် ခုထိကို မဆောင်ရွက်သေးဘူးပေါ့။ဟိုအရင်တုန်းက သိမ်းကတည်းက ပိုင်ရှင် တွေကို အုန်းပင်တစ်ပင်နှစ်ကျပ်နှုန်းနဲ့ ပေးလျော်ခဲ့တာသွားသတိရပါတယ်။အစိုးရက မိဘလား ပြည်သူက မိဘလား စဉ်းစားပေးကြပါရှင်
ဟွန်းဟွန်းဟွန်း … လာပြန်ပလား … ။ …. ဒီဆိုက်ထဲလာပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်မှ အစိုးရအဖွဲ့များ သိစေရန် လာရေးတော့ သူတို့သိမှာ မို့လို့လား .. ။
ပထမဆုံး တင်တဲ့ပို့စ်က ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီး ဒီဆိုက်ထဲဝင်လာလဲ ဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်စေပါတယ် ။
အသစ်ပေမဲ့ လပိုင်း သက်တမ်းရှိပါပြီ ၊ ရေးသူနဲ့သတင်း ပတ်သက်မှု ဝေးပါတယ် ၊ ပို့စ် တစ်ခု တည်းကြည့်
ပြီး ဆုံးဖြတ် မစောစေချင်ပါ မetone ၊ တော်ရိရော်ရိ ဖတ် လိုက်လို့လား ဒါမှမဟုတ် ရေးသူက ညံ့နေလို့
လား တစ်ခုခု ဖြစ်မှာ၊ သတင်းက ရှုပ်ထွေးနေပေမဲ့ ပြည်သူအများ၏ အလိုဆန္ဒ ကတော့ အမှန်တရားပါ မ
ဒီသတင်း ဘယ်ကရလာမှန်းမသိပေမဲ့ … ရေးထားတဲ့ဒီတေးလ် အချက်တွေကတာ့ … သာမန်လူစုံစမ်းလို့ မလွယ်တဲ့ အချက်တွေမို့ …စာရေးသူဘယ်ကရတဲ့ ဒေတာတွေလည်းဆိုတာ … စိတ်ဝင်စားမိပါရဲ့ … ။
အရာရာ ကို မျှတစွာ မြင် နိုင်ကြပါစေ ။
ဒီသတင်းအမှန်ပါပဲဆိုတာကို မီဒီယာသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျနော်အာမခံပါတယ်။
အဲဒါတွေကို လိုက်လံဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူတွေနားခိုရာ ကမ်းခြေနေရာကို အုတ်တံတိုင်းခတ်ပြီး ကျုးကျော်ထားပါတယ်။
အဲဒါကို ဖယ်ရှားပေးအောင် အစိုးရက ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
လိပ်ခဲတင်းတင်း ဖြစ်ခဲ့ရတာ ကြာနေတဲ့ သတင်းပါ ၊ ခုလောက်ထ်ိတော့အသေးစိတ်မသိ ခဲ့ရပါဘူး ၊
အမေးဇင်း ဟိုတယ် ပိုင်ရှင် နောက်ကွယ်မှာ အကောင်ကြီးကြီး ရှိနေမှာတော့ သေချာနိုင်ပါတယ် ၊
ကမ်းခြေ မြေကွက်နေရာတွေကို ပြည်သူပိုင်သဘောမျိုးသိမ်း ခံရတဲ့အပြင် ဒေသခံတွေ အနားယူဖို့ ကျန်နေ
သေးတဲ့ နေရာကွက်လပ်လေးတွေကို ပါ ထပ်မံ တရားဥပဒေမဲ့ အပိုင်စီးတာတော့ လွန်လွန်းပါတယ် ။
တိုင်စာတင်တာနဲ့..အဖြေကောင်း..ရလဒ်ကောင်းမရရင်… ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက… တရားလိုလုပ်ပြီး.. တရားစွဲရမယ်ထင်ပါတယ်.။
ဟုတ်ပါတယ်။ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွပူးတွဲတင်ပေးသင့်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုပြည်တွင်းမီဒီယာ ဂျာနယ်လစ်ကတောင်ဒေတာရထားတယ်ဆိုတော့ အဖြေမှန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားရမှာပါ။အများပြည်သူတွေကို မလောက်လေးမလောက်စားလျော်ကြေးငွေလေးနဲ့ ကြေအေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပျက်စရာတခုထပ်တိုးဦးမပေါ့ရှင်
အရာရာ ကို မျှတစွာ မြင် နိုင်ကြပါစေ with all the details , I believe ,this is not from the villagers, Although this is under the name of public , this right to use land is between hotel , Yayaka or Mayaka affair to conquer the land and sell back during Thingyan Festival. အရာရာ ကို မျှတစွာ မြင် နိုင်ကြပါစေ
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဘယ်ဖက်ကဘဲဘယ်လိုပြောကြပါစေ။ရွာသားတွေဖက်ကိုတော့မနစ်နာစေချင်ပါဘူး။အမှန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ လိုလားပါတယ်။ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ ကဥပဒေအထက်မှာ ဘာကောင်မှန်းမသိတဲ့ အမျိုးအမည်ဖော်မရတဲ့အကောင်တွေကအခန့် သားထိုင်နေကြတာမဟုတ်လား
ဟော်တယ်ကလဲ ရပ်ကျေး ရွာကျေးတွေမှာလို အသိဥာဏ်မဲ့ အပိုင်စီးလောက်မယ်ထင်ဘူးဂျ……….
အာဏာပိုင် တစ်ယောက်ယောက်က မျက်စိမှိတ် လောဘတက်ပီး မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေး
မျိုးနဲ့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရောင်းချထားတယ် ထင်တယ်ဂျ………